Imisebenzi yenkosi uAlejandro Obregón | Ukuhamba kwe-Absolut
daniel | 15/04/2021 12:18 | Ukuhlaziywa ukuba 15/04/2021 13:19 | Kholambiya
UAlejandro Obregon ithathwa njenge omnye wabapeyinti abakhulu baseMelika baseMelika ngenkulungwane yama-XNUMX. Indalo yakhe kudala yadunyiswa ngenxa yemifanekiso emitsha abayizisileyo kunye nomxholo wemisebenzi yakhe, ebisoloko ijongana nemicimbi enempikiswano.
U-Obregón wazalelwa e I-Barcelona, ​​eSpain) Ngo-1921. Nangona kunjalo, eneminyaka emithandathu kuphela ubudala waya kuhlala kwilizwe likayise, Kholambiya, kunye nayo yonke intsapho yakhe. Ubutsha bakhe buphawulwe ngokuhlala ixesha elide kuwo omabini la mazwe kunye nohambo oluninzi oluya eUnited States, eFrance nase-United Kingdom.
Uqeqesho lobugcisa lwenzeka kwiSikolo soBugcisa oBuhle e-Boston nase-Llotja e-Barcelona. Ukungena kwiimpembelelo ezininzi zenkcubeko nezobugcisa zaseYurophu, ekugqibeleni wazinza kwisixeko sase ICagagena de Indias. Kulapho, u-Obregón waba ngumhlobo wamagcisa amakhulu aseColombia anje URicardo Gómez Campuzano, uEnrique Grau, uSantiago Martínez okanye iColombia-isiJamani UGuillermo Wiedemann. Ngabanye babo wasebenza ngokusondeleyo kwaye waqala ukuphuhlisa isimbo sakhe.
Wayelilungu elibizwa njalo Iqela leBarranquilla, eyadibanisa amagcisa aphambili aseColombia kunye nezifundiswa zaphakathi kwinkulungwane.
I-condor yenye yeempawu eziphindaphindayo kwimizobo emininzi ka-Alejandro Obregón
Kwiminyaka engama-24, u-Alejandro Obregón waqala ukubonwa kwilizwe lonke ngokuthatha kwakhe inxaxheba V Isaluni yeSizwe yaMagcisa aseColombia, ngo-1944, ukufumana eyona ncomo iphambili. Kwiminyaka kamva, emva kohambo oluya kumbindi weYurophu, wadibanisa isitayile sakhe kwaye waba ngoyena mmeli uphakamileyo wangoku we intetho engokomfuziselo kumazwe aseMelika.
Kubomi bakhe bobuqu wayezimisele ukutshata nomzobi waseNgesi UFreda sargent, Watshata ePanama. Emva kwexesha waqhawula umtshato ukuze atshate kwakhona, ngeli xesha nomdanisi USonia Osorio, Umsunguli weBallet de Colombia. Ngaye wayenonyana, uRodrigo Osorio, i-cne eyaziwayo kunye nomdlali weTV. Umnqweno wesantya kunye neemoto ezibalekayo yayihlala ihleli ebomini bakhe.
Ifoto yompeyinti ethathwe kwiminyaka yoo-50, kumasango okuzinikezela kuka-Alejandro Obregón njengegcisa elikhulu laseColombia kwinkulungwane yama-XNUMX.
Phakathi kwiminyaka yee-70 waba ngumlawuli we IMyuziyam yoBugcisa bemihla ngemihla yaseBototá.
U-Alejandro Obregón wasweleka kwisixeko saseCagagagena ngo-1992, eshiya ngasemva ilifa lobugcisa elinomtsalane elinokushwankathelwa ngomnye weyona miboniso yakhe idumileyo:
«Andikholelwa kwizikolo zokupenda; Ndiyakholelwa kumzobo olungileyo kwaye ayikho enye into. Ukupeyinta yimbonakalo yomntu ngamnye kwaye kukho ukutyekela njengobuntu. Ndiyayithanda into yokupeyinta, ingakumbi iSpanish, kodwa ndicinga ukuba akukho namnye oye wanempembelelo kuqeqesho lwam.
Eyona misebenzi ibalaseleyo
Nantsi isampulu emfutshane kodwa emele imisebenzi emikhulu ka-Alejandro Obregón. Ukhetho oluhambelana kakuhle nesimbo sakhe kunye nolwimi lobugcisa:
Ijagi yeBlue (Ngo-1939) ngomnye wemisebenzi yokuqala yegcisa, eyenziweyo xa wayeneminyaka eli-19 kuphela ubudala. Ibonisa uhambo lokuqala luka-Alejandro Obregón kwihlabathi le-avant-garde yokubonisa. Kwiminyaka kamva wayeza kuba pnitaría Umzobo womzobi (Ngo-1943), umsebenzi awaziwa ngawo ngaphakathi kwezobugcisa ezinkulu zaseSpain.
Ekuqaleni kwee-50, isitayela sika-Obregón safikelela kwingcaciso epheleleyo kunye nokukhula. Ukuphenjelelwa ngu-el Cubism, inkosi yenza iziqendu ezilinganiselweyo ngokungummangaliso phakathi kwazo esinokuthi sigqamise kuzo Iminyango nendawo (1951) Kusenjalo ubomi bulubhelu (1955) kunye I-Greguerías kunye ne-chameleon (1957).
UViolencia (1962), umsebenzi owamisa u-Alejandro Obregón njengomzobi onempembelelo kakhulu eColombia kwinkulungwane yama-XNUMX.
Emva kokuvuthwa kwafika ukuzimisela, kwiminyaka elishumi yama-60s. U-Alejandro Obregón waba ngoyena mzobi ubalulekileyo kweli lizwe, enikwa amatyeli amabini ibhaso lokuqala loMzobo kwiHolo likaZwelonke. Imisebenzi eyamenza waqatshelwa Ubundlobongela (1962) kunye Icarus kunye noonomeva (Ngo-1966). Eminye imisebenzi ebalaseleyo ngeli xesha yile Ukwaphuka kwenqanawa (1960) IWizard yeCaribbean (1961) Imbeko kuGaitán Durán (1962) kunye Inkwili yolwandle (1965).
Eminye yemizobo kaObregón inomxholo wentlalo kunye nesikhalazo. Umfundi oswelekileyo y Ukulilela umfundi, bobabini ukusukela ngo-1957, bakhonza ukugxeka umbuso kaGustavo Rojas Pinilla. Kwimizobo yakhe, umqhagi ngumbonakaliso wokomfuziselo wobuzwilakhe.
Kwinqanaba lakhe lokugqibela, uAlejadro Obregón ngokuthe ngcembe wayeka ubuchule beoyile bokupeyinta i-acrylic. Oku kwamkhokelela kancinci kancinci ukuba aziqhelanise nokupeyinta kwiindawo ezinkulu ezinje ngee-facade zokwakha kwaye alibale malunga nezinto zemveli. Olu luthando umzobo oseludongeni Kwamkhokelela ekubeni enze imisebenzi eyaziwayo kwindawo ezinomfuziselo njengeNdlu yeeNgwevu yeNdlu yeeNgwevu okanye i-Luis isngel Arango Library.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Imisebenzi yenkosi uAlejandro Obregón
Imisebenzi yakhe iyamangalisa
UMaria Eperanza sitsho
Imizobo emihle eyenziwe
Phendula uMaria Eperanza
UJORGE SAENZ sitsho
Ndithengisa le powusta yoqobo nganye nge- $ 50.000 (IKHONDO) IPHEPHA LESIKOLO ELIFUNIWEYO
IINKCUKACHA ZOQHAGAMSHELWANO 2767321 BOGOTA
Phendula JORGE SAENZ
U-maria cecilia watsala i-basilio sitsho
Ewe wabuphila ubomi bakhe obukhethekileyo kwaye edume ngemisebenzi yakhe ukuvuyisana nosapho
Phendula u maria cecilia tirado basilio
ukubalisa okupinki sitsho
Q UKUZOBA NGOKUMANGALISAYO
Phendula kwi-rosa narrarvaes
I-pastry yaseDatshi kunye neelekese